कलियुगका कुरा: मुबाइल सहीद के हुनु?
मुबाइल सहीद के हुनु?
मेरो मुबाइल अफ भो भनेर धेरै गाली नगरम है। मोबाइल पड्केर साता दिनाँ नै ६ जनाले सिल्टुमर खाको खवर आएसी म त सतर्क भाछु। एकचोटी चार्ज गरेसी चार घण्टा जति खप्ने आफ्नो नि गोडा तीनेक हजाराँ किनेको चाइनिज मुबाइल छ। चोबिसै घण्टा मुबाइल अन राख्दा नि अहिलेसँ कुनै गतिलो खवर हात ला छैन। त्यसैले अफै गरेर चार्ज;नत्र त पड्केर सुइकिन बेर छैन... मर्नै परेसी के मुबाइल सहीद हुनु?(हास्नुपर्ने कारण धेरै छन् हा हा हा...)